Dhiga sanka ka yimid ama nabar, soonka ma jabinayaa? – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Haduu qofku soomanyahay oo uu dakhramo kadibna dhiig ka yimaado soonku miyuu jabayaa?
Wax dhib ah malaha Dhiiga ku yimaada nabar ama dakhar yar oo soo gaadhay qofka sooman, marka laga reebo Istoobista. Wuxuu dhahay Shiikh ibnu baaz (A.H.U):
لا يضره نزول الدم، إلا الحجامة إذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة وفيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه يفطر، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: (أفطر الحاجم والمحجوم)، أما إذا رعف أو أصابه جرح في رجله أو يده وهو صائم فإنه صومه صحيح، لا يضره ذلك
[Wax dhib ah malaha dhiiga yimaada, marka laga reebo Istoobista, sida saxiixa ahna toobistu way jabisaa Soonka inkastoo khilaaf Culumada ah jiro, laakiin sida saxiixa ah wuu jabinayaa; sida uu Nabigu (scw) dhahay: “Waa afuray ka wax toobay iyo kan la toobayba”. Haduu hungo ama dhaawac kasoo gaadho lugtiisa gacantiisa isagoo sooman, soontiisaas waa saxiix, wax dhib ahna malaha.]
arimaha Soonka, Maqaalo